Singer So Tay involved in car accident..still unconscious - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Myanmar Traffic Conrol Police dancing @ Sulay Traffic Light
Next: Moe Yu San »
Myanmar Blog » Asia Entertainment » Singer So Tay involved in car accident..still unconscious
We foundapublic photo album with many pictures of myanmar models
(photo credit -So Tay )
Wyne Su & So Tay ‘s wife Chaw Chaw
R.I.P chaw chaw
credit to : Mg Satan
မိုင်တိုင် ၂၉၁/၃တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ညာဘက်ရှေ့ဘီးပေါက်ကာ ကားမှာ လမ်းဘေးဝယ်ယာသို့ နှစ်ပတ်သုံး ပတ်လည်ရ်ျ ကျသွားခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ်မောင်း သန်းဝင်းလှိုင် အပါအ၀င် ဆိုတေး(ခ)အောင်သက်ပိုင်(၂၃)နှစ်၊ မချောချော(ခ)၀င်းဂရိသူ(၂၂)နှစ်၊ မစံပယ်မွန်(၁၈)နှစ်တို့ပါရှိပြီး မချောချော(ခ)မ၀င်းဂရိသူမှာ မိတ္တီလာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ကုသစဉ် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရပြီး မစံပယ်မွန်မှာ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာသာ ရရှိပြီး ပြင်ပလူနာအဖြစ် ဆေးကုသလျှက်ရှိပြီး ဆိုတေးနှင့် ယာဉ်မောင်း သန်းဝင်းလှိုင်မှာ စိုးရိမ်ရသည့် အခြေနေရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ယာဉ်မောင်းသန်းဝင်းလှိုင်အား သီးကုန်းရဲစခန်းမှ ပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၈၈ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
Kyaw Kyaw Bo Actor Nyi lay So Tay….Don’t leave Us… Plzzzz…
Htun Aeindra Bo “ဆိုတေး” အားလုံး ရဲ့ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် အမြန်ပြန် သတိရပါစေ…———————————————————————
Wyne SU ကိုဆိုတေးအတွက်ဝိုင်းပြီးဆုတောင်ပေးကြပါအုံး ————————————————————–
Han Nwai Nyein some ppl said, so tay…….. oh god!!! i cant believe..(နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ ဆိုတေး လုံးဝ မဆုံးသေးပါဘူး လုံးဝ သေချာပါတယ်)မင်းကိုချစ်တဲ့သူ အားလုံးရဲ့ ဆုတောင်းသံကိုတော့ ဘုရားနားညောင်းပါတယ် မင်းကံကောင်းမှာပါ
Zarnimyo Nyunt Soe Tay amyan sone ta di ya pee nay amyan kg par say ….
Thet Htar Oo မီးအိမ်‌ရှင်‌ ဆို‌တေး အမြန်‌ဆုံးသက်‌သာပါ‌စေ’
Bobby Soxer ကိုဆိုတေးနဲ့ ကားပေါ်မှာပါသွားတဲ့သူတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးနေကောင်းကြပါစေ …… အားလုံးလဲဝိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော် …..———————————————————————————–
Pearl Win Pls ….. Pray for Sotay…. Pls !!! Feel really really sad for Sotay & Sotay’s lover (မချောချော ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ )…… — ——————————————————————–
Nann Myat Phyo Thinn Dear everyone…let’s pray for Ko SoTay…. —————————————————————
San Yati Moe Myint ကိုဆိုတေးသတင်းကြားပြီးပြီလားဟင်:?
Arker Kyaw – Graffit Artist FANတို့ရေအဆိုတော်ကိုဆိုတေးက Car Accident ဖြစ်လို့တဲ့ Fanတို့ထဲမှာကိုဆိုတေးကိုအားပေးတဲ့သူတွေကောအာလုံးအားလုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ကျပါနော်ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်က သူ့အတွက်ဘေးကင်းစေမှာပါ
Min Thway တကယ်လို့သာ ကြားရတဲ့သတင်း သာ သေချာခဲ့ရင် ကံတရားက ဘာလို့ေ-ာက်-ူးတွေကိုပဲ မျက်နှာ သာပေး နေတာလည်း >>>>> ဆိုတေး အတွက်ေ—— မတရားဘူး ထင်တယ် ———————————————————
Nann Thuzar I pray for Ko So Tay & others…. ဘာမှဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ပါစေနဲ့ ——————————————————————–
Hlwan Paing “So Tay” အမြန်နေပြန်ကောင်းပါစေဆုတောင်းနေပါတယ်ကွာ ကျွှန်တော် နဲ့ “so tay”ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးက “So Tay” အတွက်
Sai Sai Fans Group ဒီပေ့ရ်ှနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပေမဲ့ .. ဒီစာတစ်ကြောင်းတော့ တင်ခွင့်ပြုပါနော် … ဒီနေ့ ဆိုတေး အမြန်လမ်းမှာ ကားမှောက်ပါတယ် .. သူ့ရည်စားကတော့ ဆုံးသွားပါပြီ .. အခုဆိုတေးက ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်နေပါတယ် .. စိုးရိမ်စရာရှိတယ်လို့ သတင်းကြားပါတယ် .. အားလုံး ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးကြပါနော် .. ဘော်ဒါတို့ ..
Kyaw Htut Swe ကြားရတဲ့ သတင်းက ရင်ထဲမှာ ဘယ်လို ကြီးမှန်းတောင်မသိဘူး ကွာ။ status တင် ဖို့ စကားလုံးတွေလည်း တစ်လုံးမှမရှိဘူး။ ဘာမှလည်း လုပ်ပေးဖို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ အမြန်ဆုံး ပြန်သက်သာလာပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် သားကြီးရာ။
ဆိုတေး ရဲ့သီချင်းများ – မီးအိမ်ရှင် Album
One Response to “Singer So Tay involved in car accident..still unconscious”
ArcheAge RMT @ November 25th, 2014 at 9:06 am: